जेरीको रमाईला क्षणहरू मूर्तिकलामा समातिए क्रिएटिव अनलाइन
र किनकि कसैलाई यो धारणा थिएन टमको रमाईलो क्षणहरू मूर्तिकलामा बदल्नुहोस्? प्रसिद्ध टम र जेरी बिरालो धेरै रचनात्मक शिल्पकला को श्रृंखला को सितारा र धेरै मजा सिर्फ एक नजर को लागी एक रमाउन को लागी गरीएको छ।
हामी पहिले नै थाहा छ टमको दु: खी भाग्य र जहिले ऊ माउ जेरी समात्न चाहन्छ। तर हामीलाई कहानी पहिले नै थाहा छ, त्यसो गर्न असम्भव हुनेछ। यसै कारण यस जापानी कलाकारले यी चतुर मूर्तिकलाहरू सिर्जना गर्न आफ्नो समय लिएका छन् ती क्षणहरू पक्रन जब गरीब टमलाई भत्काइन्छ वा साधारण रूपमा कुल्चिन्छ घरको फर्निचरको एक हिस्सा बन्न।
Taku Inoue जापानी कलाकार हो जसले ती क्षणहरू लिएको थियो जीवन र र of्ग पूर्ण मूर्तिकलाहरु गरीब टम राख्न ती हास्यास्पद क्षणहरूमा, तर आफ्नै लागि धेरै दु: खी; यद्यपि उनले जहिले पनि यसलाई राम्रोसँग लिन्छन्।
टम र जेरी सिर्जना गरिएको थियो १ 1940 .० मा विलियम हन्ना र जोसेफ बारबेरा द्वारा र पप संस्कृति आइकन बन्न १ 163 एनिमेटेड शर्टमा पुग्यो। वास्तवमा, एक एनिमेटेड श्रृंखला जसले कसैलाई उदासीन छोड्दैन र त्यो यो कलात्मक अनुशासनको सुनौलो युगको हिस्सा बन्यो र त्यो आज थ्रीडी टेक्नोलोजीद्वारा रिलिज गरिएको छ; हामी संग छ एक स्पेनिश एनिमेटेड फिल्म जुन हामी तपाईंलाई जान्न प्रोत्साहित गर्छौं र जुन लुइस बुउएलको जीवनमा आधारित छ।
त्यहाँ धेरै पलहरू छन् जुन Inoue ले आफ्ना मूर्तिकलाहरू द्वारा कब्जा गर्यो र त्यो साँच्चिकै हाँसोयोग्य छ। हामीसँग टमा कांचमा लगभग टाउको र खुट्टाहरू छन्, वा लगभग एक रातको मा रूपान्तरण उसको खुट्टाहरू त्यो टेबुलको खुट्टा भएको साथ।
वा उनको अनुहार पूर्णतया कास्ट "एक फलाम" यसलाई स्ट्याम्पिंग द्वारा र पूरै अनुहार सपाट भएको द्वारा। धेरै रमाईलो क्षणहरू र यसले हामीलाई वार्नरबाट कोयोट आफैं लिन र आफैंले ती हास्यास्पद क्षणहरू आफैंले आफैलाई तयार पार्न प्रेरित गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » जेरीको रमाइलो क्षणहरू बिरालो एक जापानी कलाकार द्वारा मूर्तिकलामा परिणत भयो
नमस्कार, उहाँ टम हुनुहुन्छ र माउस जेरी हो
बिरालो टम र माउस जेरी हो
धन्यवाद! ठुलो गल्ती, सच्याइयो।